संघुवासभा घटनामा पक्राउ परेका अरु ४ जनाले प्रहरीलाई दिए यस्तो बयान, बौदमानलाई मात्र छोड्नुको रहस्य यस्तो रहेछ – Kantipur Np
शनिबार ०६ कार्तिक २०७८
मान्छेमा सुँगुरको मिर्गौला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण परीक्षण
बाढीपहिरो अपडेट: मृत्यु हुने ३१ पुगे, ४३ सम्पर्कविहिन
विराटनगर विमानस्थल डुबानमा , रोकिए उडानहरू (तस्वीर)
संघुवासभा घटनामा पक्राउ परेका अरु ४ जनाले प्रहरीलाई दिए यस्तो बयान, बौदमानलाई मात्र छोड्नुको रहस्य यस्तो रहेछ
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन ०४, २०७८ समय: १७:१७:१८
Kantipur News Nepal
घटना भएको धेरै दिन पछि संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ स्थित उम्लिङमा ६ जनाको शव फेला परेको घटनामा मुख्य ब्यक्ति नै लोकबहादुर नभएर उनका काका भएको खुलेको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी सोमवार सार्वजनिक गरेको छ ।
लोकबहादुरको बयानका आधारमा प्रहरीले अरुलाई पनि पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा ४७ वर्षीय खड्ग बहादुर कार्की, उनका छोरा २८ वर्षीय हस्त बहादुर कार्की, ४९ वर्षीय रण बहादुर कार्की र १७ वर्षीय नरेश कार्की छन् रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
भदौ २६ मा प्रहरीले २५ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो भने त्यसको केही दिन पछि उनका भाईलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । लोकबहादुरका भाई नरेशवाट रञ्जुले प्रयो गर्ने मोवाइल समेत फेला परेपछि उनी पक्राउ परेका थिए । सोही मोवाइलका कारण अरुको पनि घटनामा संलग्नता देखिएको छ ।
पप्राउ परेका सबैले घटना स्वीकार गरेका छन् । लोकबहादुरका काका खड्ग बहादुर घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको दावी प्रहरीले गरेको छ । योजना भने लोकबहादुरको घरमै भएको थियो ।
घटना प्रहरीले अनुमान गरेजस्तै विहान तिर भएको उनीहरुको वयानवाट पनि खुलेको छ । भदौ २१ मा उम्लिङका ५५ वर्षीय तेजबहादुर कार्की, आमा पार्वती कार्की, श्रीमती कमला, बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना कार्की, ८ वर्षका विपिन कार्की र पाँच वर्षीया गोमा कार्कीको शव फेला परेको थियो ।
लोकबहादुरको घरमा बसेर काका सहित सबै जनाले घटनाको योजना बनाएको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । तेजबहादुर खेताला बोलाउन आएको बेलामा घटना गराउने योजना उनीहरुको पहिल्यै देखि थियो अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले भने ।
पक्राउ परेकाहरुले आफूहरुमाथि निरन्तर अपमान गरेकाले यस्तो निर्णयमा पुगेको बताएका छन् । कसैलाई पा गल त कसैलाई ज ड्या हा भनेका कारण रिस उठेको बताएका छन् ।
तेजबहादुरको परिवार उनीहरु भन्दा आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका कारण पनि उनीहरुलाई रिस उठेको थियो । सुरुमा तेजबहादुर र उनकी श्रीमतीलाई मात्र मा र्ने योजना भएको भएपनि पछि अरुले पनि घटना देखेका कारण परिवारका सबै परेको उनीहरुले प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् ।
तेजबहादुरको परिवारमा रहेका ७ जनामध्ये ६ जनाको शव फेला परेको थियो । तर उनीहरुले बौदमान कार्कीलाई भने केही गरेनन् । आफुहरुलाई बौदमानले निकै माया गर्ने गरेका कारण उनलाई केही नगरेको उनीहरुले प्रहरी समक्ष बयानमा भनेका छन् । उनले कान पनि नसुन्ने र आँखा पनि नदेख्ने भएका कारण कुनै जोखिम नभएकाले उनलाई छोडेको बताएका छन् ।
Last Updated on: September 20th, 2021 at 5:17 pm
९० पटक हेरिएको
ओलीले गरे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव !
ओलीलाई विश्वप्रकाशको जवाफ : एमालेले चाहँदैमा सरकार ढल्दैन
धनी बन्ने इच्छा छ ? शास्त्र भन्छ जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी १० गल्ती
१.	विश्वभर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र वाट्सएप ६ घण्टा बन्द
२.	यि चार प्रहरी जो आइजीपी बन्न भारतीय दूतावास छिरे !
३.	जान्नुहोस आइतबार जन्मेका मानिसको भाग्यको बारे
४.	मुख्खै छाडेर गाली गरेपछि सूर्य थापाले भेटे संसद भवन अगाडिको सडक मै रामधुलाई !
५.	एमालेले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा विधान सम्मेलनमा खर्च गर्योः रामकुमारी झाँक्री
६.	३३ किलो सुन काण्डमा संलग्न रहेका गोरेसहित छ जनालाई जन्मकैदको फैसला
७.	अरुको यी ६ चिज कहिल्यै प्रयोग नगर्नु : भलो हुँदैन !
८.	माओवादी केन्द्रले रच्यो इतिहास- पार्टीबाट मन्त्री बन्नेमा ५० प्रतिशत महिला !
९.	कति छ शीर्ष नेताहरुको शैक्षिक योग्यता ? सबै भन्दा कम योग्यता ओलीको !
ओलीको दावी : हामीले चाहे यो सरकार एक सातामा ढल्छ, अर्ली इलेक्सन ठिकै छ
© Copyright 2016–2021 Kantipur Np . First Symptoms Corona